Murtida iyo Jiritaanka Afka
W/Q: Axmed Iid Aadan
Inta aanan maqaalka bilaabin aan Afsoomaaliga maanta kula hadlo beydad gabay ah oo ku jiray gabaygii “Fiin” ee uu tiriyey abwaankii weynaa, Rabbi ha u naxariistee, Cali Xuseen Xirsi, kuwaas oo uu xilli dhexdii ahayd mudane A. M. Yuusuf ku bilaabay qoraal aad u qiima badnaa oo magaciisu ahaa “Dhaawgii Baabbow”. Beydadkaasi waxay ahaayeen:
Ashahaadda iyo waan aqaan, aayaddii nebiye
Hayeeshee ilmada kaa dhacdiyo, ummalka guudkaaga,
In yar iiga sheeg waxaan rabaa, inaan ogaadaaye!
Fallaadho badan ayaa afkeenna dibedda kaga soo dhacayey intii uu jiray, welina kaga soo dhaca. Waxyeello kale ayaa iyaduna intaa gudaha kaga socota, waxana had iyo jeer waxyeelladaas kula kaca dadkiisa oo ay inta badan wacyi la’aan iyo kalsooni-darro isugu darsameen. Waxyaalahaasi waxay keeneen in uu afkii godob tirsado, ilmo ka da’do, cid danaynaysana inta badan la arki waayo.
Dhibaato kastaa ha soo foodsaarto ee waxaa hubaal ah in uu in badan bedbaadi doono. Waxaa isku hayn doonta, in uu sida afaf Urduu-gu ka mid yahay dhadhan-doorsoomona u diidi doonta murtidiisa badda ah ee meesha sare gaadhsiisan, caankana uu ku yahay.
Afkeennu waa af hodan ah, haddii si daacadnimo ku jirto loo hadlo iyada oo aan la ammaanayn na waa af dhan kasta oo la eegoba bulshadiisa ku filan, ayna ku meelmari karto. Waa af macluumaadkii hore iyo aqoonta casriga ah ee maanta la gaadhayba qaadi kara, si wacanna u kaydin kara. Waa af sida murtidii abwaannadii horyaalka ahaa ee Ina Jadeer, Xirsi Boqon, Salaan-Carrabay, Cali Jaamac Haabiil, Maxamed Nuur Fadal, Xaaji Gabay Xaddi, Ismaaciil-Aflow, Gahayr, Faarax Nuur, Cumar-Usteeliya, Timacadde, Barkhad-Cas, Xaaji Aadan Axmed Af-Qallooc, Qaasim, Cabdi Iidan iyo maansoyahanno kale oo aynaan koobi karaynba. Ma aha af taag daran oo afaf kale ku tiirsan sida ay dadka qaar ku doodaan, ee waa af weyn oo madaxbannaan oo goonni u taagan.
Waxaa mararka qaarkood la sheegsheegaa in ay jiraan siyaasado shisheeye ka dambeeyo oo afkeenna iyo suugaantiisa qiimaha badanba ka dhan ah. Ma jirto cid qiimayaasheenna wax yeelli kartaa, hase ahaato ee hala ogaado in ay af la’aantu mushkilad weyn tahay. Afku waa waxa dhaqanka iyo ummadnimadaba dhisa, ayna ku taagan yihiin. Haddii afka la waayo, ama laga takhalluso waxaa markaa la waayayaa jiritaanka dadnimada, maansada heerka sare ah, xorriyadda maskaxda iyo karaamada guudba, waxayna bulshadu noqonaysaa mid maskaxda laga haysto oo qowmiyado kale u dullaysan.
Cabsi badan lagama qabo in “afka” la waayo inta ay murtidiisu jirto, hase yeeshee waxaannu ka warwarsannahay in uu doorsoomo. Dad aan caqli iyo cilmi midna qiimaynayn ayaa had iyo jeer afka ereyo qalaad oo kooban oo ay maqleen ku badhxa iyaga oo waxaa aqoon ama ilbaxnimo moodaya. Waxaasi afka waa ku dhibaato, dan iyo faa’iido midna ma aha, ummadaha wax fahamsan na laguma arko cid afkeeda oo dubbe lala dhaco ama la jajabiyo ilbaxnimo moodda.
Had iyo jeer marka afkii ereyo qalaad lagu walaaqo, idaacadaha iyo meelaha muhiimka ahna af laaxin ku jiro ama naxwe ahaan qaldan lagaga hadlo waxa dhacaysa dhibaato weyn oo luqadeed. Waxa dhici karta in ay carruurtu ku barbaarto Afsoomaali jajaban oo aan hagaagsanayn, dhadhan murtiyeedna aan lahayn. Waxaa halis loogu jiri karaa in ay suugaanta/murtida iyo hadalkiisa intiisa kale kala go’aan, dabadeedna ay facyaasha dambe ku hadlaan af silloon oo aan la mid ahayn afka wanaagsan oo maanta lagu hadlo.
Si dhibaatooyinka noocaas ah looga bedbaado waxaa fiican in bal intii la awoodi karo afka waxyeellada laga ilaaliyo, tixgelinta uu mudan yahayna la siiyo. Waxa fiican in murtida loo qiimeeyo si la mid ah sidii ay dadkeennii hore u qiimayn jireen, laguna dadaalo in suugaanta iyo qaybaha kale ee hadalkaba lagu wada tiirsado si aanay u kala fogaan.
Xagga waxbarashada in carruurta casharrada afkooda loogu dhigo ilaa fasalka siddeedaad iyada oo aan laga tegayn xiisado kale oo ay ku bartaan afafka kale ayaa ah tallaabo fiican oo midho dhalin karta. Waxay ardayda habkaas wax ku barataa mar walba ka wacyi sarraynaysaa kuwa manhajyadooda oo dhan lagu saleeyo afafka qalaad; kuwaas oo inta badan afkooda dibnaha uun kaga hadla,hase yeeshee aan murtidiisa, qoraalkiisa iyo xikmaddiisaba aqoon.
Qofka afkiisa afaf kale u jabiyaa waxa uu ka dhigan yahay sida qof dadnimadiisii iyo jiritaankiisiiba ka ordaya, oo waxa uu u hanqal taagayo aan la fahmi karayn. Waxa kale oo lagu meteli karaa qof xoolihiisii oo irmaan gudub u weydaaranaya oo doonaya in uu duunyo dad kale leeyahay isha la raaco, sheedddana ka eego
Run ahaantii lama diiddana in afaf shisheeye la barto, oo laga soo kasbado xikmad iyo aqoon dheeraad ah oo ay dadkeennu ku meelmaraan, wax badanna ka faa’idaan. Taasi waa guul weyn haddii fahamkeeda la leeyahay, waxase la diiddan yahay in wax aan faa’iido lahayn lagu daalo, sida in ereyo shisheeye oo aan baahi loo qabin hadalka lagu walaaqo marka la hadlayo ama la qudbadaynayo. Sidaasi waa si aan habboonayn, waxayna afkeenna u dullaynaysaa afafka kale ee uu la heerka yahay, ama uu caaraddaba dheer yahay.
Afkeennu waa af weyn, oo Soomaali iska daayee, ay xataa shisheeyihii wax ka qoray qireen hodantooyadiisa iyo xikmadda ballaadhan ee uu xambaarsan yahay. Waa af qof Rabbi iyo ummadnimo garanayaa aanu marna ku gefayn, suugaantiisuna ay goleyaasha caalamiga ah meel sare ka geli karto haddii la geeyo. Waxaa dhacday in tartan-suugaaneed weyn oo caalami ah oo sannadkii 2003 dalka Iswiidhan gaar ahaan magaalada Lund lagu qabtay ay kaalinta koowaad gashay maanso aad u qiima badan oo curiyey abwaan Cabdi Aadan Xaad ( Cabdi Qays). Taasi waa guul weyn oo bulsho-weynteenna u soo hoyatay, waxayna caddaynaysaa qiimaha sare ee uu afkeennu leeyahay. (Ka raadi warbixin arrintaa la xidhiidha bogga weyn ee suugaanta lagu kaydiyo ee Farshaxan.com).
Afka, murtida, fekerka iyo dhaqanka waxaa ka dhexeeya xidhiidh adag, mararka qaarkoodna waxaa la moodaa in ay isku duuban yihiin ama wada socdaan. Maanta in fikradaha reer Galbeedka aad loo qaato, kuwa ummadaha kalena aanay meelmarin waxaa u sabab ah in ay reer Galbeedku luqadahooda aad uga shaqeeyeen, una hormariyeen halka ay ummadaha qaarkood kaga mashquulsan yihiin in ay is laayaan, oo sidii carruurta la kala celiyo, qaarkoodna kolba meel shir aan macno lahayn loogu qabto.
Dad badan baa laga yaabaa in ay u qaataan in aynu afkeenna iska ammaanayno, oo aynaan meesha wax tartan geli kara ama mudan in lagu daalo ku hayn. Laakiin waxaa laga yaabaa in dadka sidaa qabaa aanay xasuusnayn in aanu dahabku u baahnayn in la xayeysiiyo.